Azonao lazaina amiko ve ny fomba hananganana backlinks amin'ny 2016 miaraka amin'ny Web 2. 0 mampifandray ny fomba fanao?
Alohan'ny zavatra hafa, avelao hiatrika izany - Web 2. 0 mbola miasa ny fampifandraisana ny fomba fanao! Noho izany, raha te-hahalala ny fomba hananganana backlinks amin'ny 2016 ianao, raiso ny tombontsoa mety amin'ny Web 2 tsara indrindra. 0 mampifandray ny fomba fanao, andao hijery ny torolalana fohy etsy ambany. Ny tanjontsika dia ny hanatsara ny fialan-tsasatry ny tranokala na ny blôginao - raha tsy manimba ny traikefan'ny mpampiasa ny mpikaroka velona. Ary mazava ho azy, te-hanana ny zava-drehetra amin'ny toerana ianao mba hisorohana ny ahiahiana amin'ny fampiasana paikady na tetika tsy azo ekena. Amin'izany fomba izany, afaka mandika ny fitsipi-pitenenana maimaim-poana ianao ary mety hahazo ny sazy mihatra aminao. Izany no mahatonga ahy haneho aminao ny fomba hananganana backlinks amin'ny fomba tsara indrindra sy azo antoka azo ampiharina amin'ny 2016, mba tsy hahavery ny Google.
Tadidio anefa fa handray soa amin'ny fananganana tranonkala 2 ianao. 0 backlinks tokony ho tratranao ao anatin'ny tetik'ady SEO mitombina tsara. Ary izany dia mila anao hampiasa fotoana sy ezaka be dia be amin'ny famoronana rohy miasa tsy dia tsara loatra izay afaka manolotra ny sandan'ny tena marina ho an'ny mpitsidika ny pejy. Raha tsy izany, ny tranonkalanao dia hanangana sainam-pirenena amin'ny Google, ary izany dia mifarana amin'ny sazy miharo foana - na ho ela na ho haingana. Izany no mahatonga anao tsy maintsy manaisotra foana ireo tranonkala maro izay mampanantena mpivarotra isan-karazany, na haba goavam-be ho an'ny HQ aza - miaraka amin'ny kabary feno tononkalo mitaky ny lahatsorany rehetra dia avy amin'ny tranonkalan'ny blaoginy indrindra sy ambony indrindra.
Ny teny fampihorohoroana ananako ho anao ihany no raisinao ho azo antoka - Ny fihazakazahana ho an'ny fifanakalozana haingana dia midika fa tsy mandany fotsiny ilay vola sarobidy ianao, fa ataovy izay tsy hitranga mialoha ary mety hitera-doza kokoa than good. Noho izany, andao hiverina amin'ny teboka - mamorona Web 2. 0 rohy izay tena mahavita manome ny tsara indrindra amin'ny vokatra tsara indrindra amin'ny SEO. Ity ambany ity ny lisitr'ireo lahatsoratry ny bala fototra azonao mba hahatakarana ny fomba hananganana backlinks amin'ny 2016 - ny lalana marina.
Mametraka ny Fanatrehana Online
Mametraka ny fototra iorenan'ny fisian'ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny orinasa na blôginao maharitra. Ny dingana voalohany eto dia ny hameno ny mombamomba anao ao amin'ny tranonkala lehibe 2. 0 zotram-piarahamonina misy ifandraisany amin'ny lahasanao na ny lohahevitra ankapobeny. Noho izany, hamaly aho hoe ahoana no fomba hananganana backlinks amin'ny 2016 hatrany am-piandohana - alefaso amin'ny famitana ny mombamomba anao amin'ireto sehatra sosialy manaraka ireto:
mameno ny pejy manokana ao amin'ny Google My Business;
mamorona ny pejinao ao amin'ny Yelp;
kaonty sosialy feno amin'ny Twitter, Facebook, LinkedIn;
mandroso amin'ny fanamafisana ny fanamafisana rohy amin'ny pejy Alexa;
tsidiho ny TripAdvisor (tsy maintsy atao raha manana fifandraisana amin'ny B2B ianao, na ny orinasa misy biriky-sy-mortar component).
Fantaro ny anaran'ny orinasa
Raha vao tafiditra daholo ireo kaonty sosialy sy pejin-tsosialy rehetra dia izao fotoana izao ny mampiditra ny rohy mankany amin'ny tranokalanao tsirairay. Ataovy izany, aza adino ny hametaka ny rohinao vao noforonina amin'ny teny fanalahidy fototra. Soso-kevitra: manana bolongam-peo marika na pejy manohana tsara hevitra miaraka amin'ny Questions & Answers (toa an'i Quora). Miasa toy ny afobe izy!
Mamorona tsanganana Community
Farany, ny zava-drehetra tokony hataonao dia ny hijanona tanteraka amin'ny tontolo SEO, ary miasa tsara amin'ny votoatiny izay manome lanja ny mpampiasa. Mba hahatonga ny zavatra rehetra ho voajanahary dia tokony hifantoka amin'ireto manaraka ireto ianao:
mamoaka votoaty mahafinaritra mba hampifandraisana azy indraindray;
tsy manangana fifandraisana mihoatra ny dimy isan-kerinandro;
lahatsoratra famoahana famoahana ao amin'ny bilaogy Tumblr, pejy fanentanana ao amin'ny Facebook, bolongana WordPress, kaonty ao amin'ny Instagram, ary fahitalavitra amin'ny YouTube Source .